Shiinaha 5/16 Kubbadda birta ah ee loo yaqaan 'Chrome Steel Ball' oo laga sameeyay Shiinaha Soo -saaraha iyo Bixiyaha | Lixin
Waxaan ku hawlan nahay soo dejinta iyo dhoofinta ganacsiga kubbadda birta chrome, kubbadda birta kaarboon, kubbadda birta ah iyo wixii la mid ah. Kobacayagu wuxuu ku xiran yahay qalabka hal -abuurka leh, hibooyinka cajiibka ah iyo xoogagga tiknoolajiyada oo si isdaba joog ah loo xoojiyay. U hoggaansanaanta falsafadda ganacsiga ee “marka hore tayada, sumcadda marka hore, adeegga marka hore”, waxaan dhidibbada u dhignay xiriir iskaashi oo ballaadhan macaamiisha gudaha iyo dibaddaba, iyo sidoo kale sumcad wanaagsan. Waxaan leenahay saldhig dhaqaale oo xooggan, ilaha wax soo saarka hodanka ah, koox adeeg oo aad u fiican. Anaguna waxaan diyaar u nahay inaan si wada jir ah ula shaqeyno saaxiibbada adduunka si aan u abuurno mustaqbalka!
Saaminta saxda ah, qaybaha baabuurta (bareegyada, isteerinka, usheeda xariiqda), baaskiilka, kiciyeyaasha, aaladaha, simbiriiriyeyaasha, isku xirnaanta degdegga ah, aaladda mashiinka, farsamooyinka qufulka, suumanka gudbiyaha, kabaha, qalimaan, bambooyin, qasabadaha, aaladaha cabbiraadda, fillooyinka.
Kormeerka & Xakamaynta Tayada Badan
Waxaan sameynay nidaam tayo aasaasi ah iyo noocyo u gaar ah qalabka kormeerka, oo ay ku jiraan aaladda engegnaanta, aaladda wareegsan, aaladda microscope iyo wixii la mid ah. Kala -soocidda qiyaasta rullaluuqa, kormeerka korontada iyo kormeerka muuqaalka ayaa ah siyaabahayaga caadiga ah ee lagu xakameeyo tayada loona hubiyo in kubbado goosani aysan ka soo bixin warshaddeenna. Ujeedadayadu waa inaan bixinno kubadaha ugu fiican adduunka oo dhan.
Liaocheng Lixin Bearing Co., Ltd waa shirkad warshadeed iyo ganacsi oo isku dhafan wax soo saarka iyo iibinta. Waxay inta badan ku hawlan tahay soo dejinta iyo dhoofinta ganacsiga saamaynta iyo kubadaha birta saxda ah. Badeecadaha ugu waaweyn waa saa'idka kubbadda jeexdin qoto dheer, saa'idka rullaluistemadka duuban, saa'idka rullaluistemadka, saa'idka rullaluislaha is -toosinta, cirbadaha duubista irbadda, saa'idka kubbadda riixidda, kubbadda birta chrome, kubbadda birta kaarboon, kubbadda birta aan lahayn iyo wixii la mid ah . Waxaa laga dalbadaa baabuurta, mootooyinka, qalabka guryaha, tolidda iyo mashiinnada korontada, aaladaha isboortiga, qalabka korontada iyo qalabka kale ee farsamada. Waxaa si ballaaran loogu dhoofiyaa daraasiin dalal iyo gobollo ah sida Yurub, Ameerika, Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed. Waxaa si weyn loo aamminsan yahay oo ay nagu taageersan yihiin macaamiisha adduunka oo leh tayadayada ugu fiican iyo adeegga dhabta ah.
1, 250kg/xirxirida durbaanka birta, 4 durbaan oo ku jira hal sariir, 78cm*78cm
2, 10kg/sanduuq, 100 sanduuq oo ku jira hal kiish oo alwaax ah, 92cm*73cm*67cm
3, 5kg/polybag, 90 bacaha oo ku jira hal kiis oo alwaax ah, 60cm*80cm*40cm
4, 25kg/kartoon, 40-60cartons/pallet, 92cm*73cm*67cm
MAXAA NAGU DOORTAY
SOO SAARKA SARE
BIXIN DEGDEG AH
Waxaan nahay soo -saare xirfadle ah iyo ganacsade.
Kubadaha noocyadu badan yihiin ayaa ah badeecadahayaga ugu waaweyn, kuwaas oo faa iido u leh tayada iyo qiimaha.
Waddan kasta oo adduunka ah ayaa macaamiil noo ah oo noqon doona.
Dhoofinta degdegga ah iyo kuwa kala duwan waxay hubinayaan in kubbaduhu ku soo gaadhaan ASAP.
Adeegga 24 saacadood laga bilaabo baaritaanka ilaa adeegga kadib ayaa la heli karaa.
Hore: Warshadda Xirfadlaha ee Shiinaha ahama Steel 302 kubadaha
Xiga: 3/16 Kubbadda Kaarboon Kaarboonta Yar ee loo isticmaalo Baaskiilka
Kubadda birta ee Shiinaha
H62 Kubadda Naxaasta, Kubbadda Naxaasta ee Adag, Kubadaha Copper -ka Yar, Madax Ball Check naxaas, Kubadda naxaasta, Kubadda naxaasta ee H65,